Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » American Airlines marka la barbar dhigo Jet Blue: Xubin Fulinta Platinum ah waxay leedahay jawaab la yaab leh
American Airlines marka la barbar dhigo Jet Blue: Xubin Fulinta Platinum ah waxay leedahay jawaab la yaab leh
Ahaanshaha xubin ka tirsan Shirkadda Diyaaradaha ee 'American Airlines Executive Platinum' waxaa laga yaabaa inay leedahay macno yar markii aad diyaarad ka raaceyso AA oo ay la socoto Roxie. Waxaa muuqata inuu jiro farqi weyn oo milkiilaha xayawaanka raba inuu ka doorto JetBlue shirkadda American Airlines.
SAMEYNTA SAHANKA SAXDA ah ayaa aad uga duwan samaynta waxa saxda ah.
Diyaaradda American Airlines iyo JetBlue.
Muxuu Xubin Fulinta Platinum ee Duulimaadyada Mareykanka ah dhowr sano dhab ahaantii uga dhigan tahay Diyaaradda?
Tani waa xoogaa hadal ah iyo qoraal dheer sidaa darteed ku sii wad akhriska rabitaankaaga. Laakiin aqrinta iyo wadaagista tani waxay ka caawin kartaa milkiileyaasha kale ee xayawaanka / kuwa jecel ee qorsheynaya inay duulaan xayawaankooda maalin maalmaha ka mid ah. Kaliya ma doonayo inaan waayo-aragnimadayda xun ee American Airlines ku dhacdo dadka kale.
Diyaaradda American Airlines waxay leexisay Frenchie, Roxie oo naga duushay duulimaadkeena PBI - DFW - LAX maxaa yeelay sida muuqata, ma awoodo inay istaagto diyaaradda inta ay xiran tahay oo ay soo jeesan karto.
Way awoodaa inay jeedsato laakiin waxay ka gudubtaa dusha sare ee side. Ilaa inta aan ogahay, eeyaha yar yar iyo eey yaryar oo yar yar ayaa sameyn kara taas oo la siiyay cabirka cabirka la oggol yahay ee qaadayaasha.
Roxie waxaan la raacay American Airlines dhowr jeer taasna waligeed ma aysan aheyn arin. Natiijo ahaan waa inaan joojiyo duulimaadkeyga oo aan awoodi kari waayey inaan duulimaadkeyga u aado LA. Tani runtii waxay aniga iyo Roxie galisay xaalad aan la hubin oo garoonka diyaaradaha ah. Runtii ma fahmin caqliga diidmadayada.
Diyaaradda American Airlines ayaa joojisay boqolaal duulimaad maalin kasta sababo la xiriira awooddooda maareynta kor u kaca iyo had iyo jeer buugaagta duullimaadyada.
Tani uma muuqato inay ku dhaceyso shirkadaha kale ee duulimaadyada sidaas darteed waxay tilmaan u tahay karti darrida. Dhacdadan ka hor, waxay codsanayeen mutadawiciin inay kuraasida u dhiibaan lacag.
Kadibna waxay joojiyeen duulimaadkaygii asalka ahaa laba saac ka hor duulimaadka. Markaa dib ayaa iigusoo qortey duullimaad ka degay Burbank halkii laga oran lahaa Dalka Orange oo guriga ku dhow. Waxaan rumeysanahay inay taasi dhacday maxaa yeelay waxay helayaan sabab kasta oo ay ku sii daayaan kuraasta si ay u buuxiyaan buugaagtooda iyo dhammaan baajinta duulimaadyada.